22 “Sɛ obi kowia nantwi anaa oguan kum no anaa ɔtɔn no a, ɔde bi besi ananmu. Sɛ nantwi na owiae a, ɔmfa anantwi anum nsi ananmu, na sɛ oguan na owiae a, ɔmfa nguan anan nsi ananmu.+ 2 (“Sɛ ɔkorɔmfo+ rebu pon akowia ade+ na obi bɔ no ma owu a, onni mogya ho fɔ.+ 3 Nanso sɛ ɔbae no na owia apue a, ɛnde obedi mogya ho fɔ.) “Ɛsɛ sɛ ɔhyɛ ananmu ɔkwan biara so. Na sɛ onni hwee a, ɛnde wɔbɛtɔn no de atua nea owiae no ka.+ 4 Sɛ wohu sɛ aboa a owiae no wɔ ne nkyɛn na onwui a, nantwi oo, afurum oo, oguan oo, ɔbɛbɔ ho abien ahyɛ ananmu. 5 “Sɛ obi gyaa ne mmoa ma wɔkɔwe ne yɔnko afuw mu nneɛma anaa wɔkɔsɛe ne bobeturo a, ɛsɛ sɛ ɔde n’ankasa afuw anaa ne bobeturo mu nnepa hyɛ ananmu.+ 6 “Sɛ ogya tɔ nsɔe mu na ɛtrɛw kɔhyew awi a wɔatwa agu hɔ anaa nea esisi hɔ anaa afuw+ bi a, nea ɔsɔɔ ogya no betua nea ahyew no ka. 7 “Sɛ obi de sika anaa agyapade bi ma ne yɔnko sɛ ɔmfa nsie+ na obi kowia fi fie hɔ na wohu ɔkorɔmfo no a, ɔbɛbɔ ho abien ahyɛ ananmu.+ 8 Nanso sɛ wanhu ɔkorɔmfo no a, wɔmfa ofiewura no mmra nokware Nyankopɔn anim+ nhwɛ sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔde ne nsa bɔɔ ne yɔnko no agyapade mu anaa. 9 Na asɛm a ɛfa mmarato+ biara ho de, nantwi oo, afurum oo, oguan oo, atade oo, biribiara a ayera a obi bɛka sɛ, ‘Ɛyɛ me de’ no, wɔmfa wɔn baanu asɛm no mmra nokware Nyankopɔn no anim.+ Nea Onyankopɔn bɛka sɛ odi fɔ no, ɛsɛ sɛ ɔbɔ ho abien hyɛ ne yɔnko no ananmu.+ 10 “Sɛ obi de n’afurum anaa ne nantwi anaa n’ayɛmmoa bi ma ne yɔnko sɛ ɔnhwɛ so na owu anaa opira anaa obi kyere no bere a obiara anhu a, 11 ɔnka ntam+ wɔ Yehowa anim sɛ ɔmfaa ne nsa nkaa ne yɔnko no agyapade.+ Ɛba saa a, aboa no wura no nnye ntom, na ɛnsɛ sɛ ne yɔnko no tua bi hyɛ ananmu. 12 Nanso sɛ obi na owiae wɔ ne nkyɛn a, ɛnde ɔnhyɛ ne wura no ananmu.+ 13 Sɛ wuram aboa na ɔtetew+ no mu a, ɔmfa ɛho adanse mmra.+ Nea aboa bi atetew no mu de, ɛnsɛ sɛ otua bi hyɛ ananmu. 14 “Na sɛ obi kɔsrɛ aboa bi fi ne yɔnko hɔ+ na opira anaa owu bere a ne wura no nni hɔ a, ɛnde ɛsɛ sɛ nea ɔkɔsrɛɛ aboa no hyɛ ananmu.+ 15 Nanso sɛ esii wɔ ne wura no anim a, ɛnde ɔrenhyɛ ananmu. Afei nso sɛ aboa no wura no de maa no gyee sika a, mpatade no nyinaa wɔ sika no mu. 16 “Sɛ ababaa bi wɔ hɔ a obiara nsa nna ne so na ɔbarima bi to no brada ne no da+ a, ɛsɛ sɛ ɔbarima no tua tiade na ɔware no.+ 17 Na sɛ ababaa no papa ka sɛ ɔremfa no mma ɔbarima no mpo a, ɛsɛ sɛ otua sika a wɔde gye mmaabun aware no.+ 18 “Mma ɔbea sumanni biara nntena ase.+ 19 “Obiara a ɔne aboa bɛda no, wonkum no.+ 20 “Nea obefi Yehowa akyi abɔ afɔre ama anyame foforo no, wɔnsɛe no.+ 21 “Nteetee ɔhɔho na nhyɛ no so,+ efisɛ mo nso na moyɛ ahɔho wɔ Egypt asase so.+ 22 “Monnteetee okunafo anaa agyanka.+ 23 Sɛ moteetee wɔn na wosu frɛ me a, metie wɔn sufrɛ;+ 24 na m’abufuw bɛdɛw,+ na mede nkrante bekunkum mo ama mo yerenom ayɛ akunafo na mo mma ayɛ nnyanka.+ 25 “Sɛ mobɔ me nkurɔfo a ahia wɔn+ bosea a, monnyɛ mo ho apoobɔfo a wɔpɛ mfaso bum. Mommfa mfɛntom biara nnka ho.+ 26 “Sɛ wugye wo yɔnko ntama sɛ awowa+ na onwini dwo a, san fa n’ade kɔma no. 27 Ɛno ara ne nea ɔde kata ne ho.+ Sɛ ne nsa anka a, dɛn na ɔde bɛda? Sɛ osu frɛ me a, metie, efisɛ meyɛ mmɔborɔhunufo.+ 28 “Nka Onyankopɔn ho abususɛm+ biara, na nnome wo man mu panyin+ biara. 29 “Ntwentwɛn wo nan ase sɛ wode wo nnɔbae ne wo nsã anaa ngo bɛma.+ Fa wo babarima panyin ma me.+ 30 Saa ara na fa wo nantwi ne wo guan abakan ma me:+ Ma ɔntena ne maame ho nnanson.+ Na da a ɛto so awotwe no, fa no ma me. 31 “Monyɛ kronkron wɔ m’anim.+ Sɛ aboa bi tetew nam mu wɔ wuram a, monnwe saa nam no.+ Montow nkyene mma akraman.+